Qaar ka mid ah qeexitaannada Samsung Galaxy A51 ayaa la helay Androidsis
Dhawaan waxaan heli doonnaa dhexda dhexe ee taxanaha caanka ah ee Samsung Galaxy A, iyo kala sifeynta astaamaheeda iyo astaamaha farsamo ee ugu muhiimsan, taasoo si wanaagsan loo qabtay dhowr saacadood ka hor, sida la sheegay. Waa maxay mobilada aan tixraacno? Galaxy A51, dabcan!
Samsung waxay la qabsatay soo saarista kala duwanaanshaha noocyada kala duwan ee casriga ah. Galaxy A51 wuxuu noqon doonaa nooc cusbooneysiin iyo xoogaa horumar ah Galaxy A50Dabcan, sidaa darteed waxaad la wadaagi doontaa waxyaabo yar qalabkan - ama sii wad, halkii - iyo macluumaadka cusub ayaa tilmaamaya.
Diidmadii hore ee ka timid bartilmaameedka Geekbench waa inay la xiriirtaa tan bartamaha soo socota, sida muuqata. Samsung Galaxy A51 ayaa la sheegay inuu ka soo muuqday kaydka xogta aasaasiga ah ee leh octa-core Exynos 9611 chipset iyo 4 GB oo RAM ah. Nidaamka qalliinka ee lagu faafiyey munaasabaddaas wuxuu ahaa Android Pie.
Nidaamka dambe ee sawir-qaadista ee terminaalkan wax-qabad ee muddada dheer la sugayay waxaa lagu dhejin doonaa sanduuq qaabaysan oo "L" ah. Waxaa la tilmaamayaa inay jiri doonaan afar dareemayaal oo ay ku yeelan doonaan shaashadeeda hore, halka sawirada iskaa wax aan ka badnayn laga filayo. Intaas waxaa dheer, Mobiilku wuxuu yeelan doonaa isku xira 3.5 mm, shaashad AMOLED FullHD + oo leh dhibco wuxuuna yeelan doonaa USB Type-C dekedda iyo akhristaha sawirka faraha. Marka laga hadlayo bilicdeeda, waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo lacag ah, midab madow iyo buluug ah.
Warbixinnada qaar ayaa sheegaya in taleefanka casriga ah uu durba bilaabay wax soo saarka dalka Hindiya. Waxaa cad tani waxay noo sheegaysaa in taariikhda la bilaabayo isla ay dhici doonto toddobaadyada soo socda gudahood, si waqti aad u yar ay rasmi u noqon karto Dabcan, waxay hubaal ahaan laheyd oo keliya Hindiya markii ugu horeysay. Sidaa darteed, suuqyo kale ayaa gadaal ka heli doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Noocyada muhiimka ah ee Samsung Galaxy A51 ayaa la helay